.အမာခံပရိသတ်ရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနာရေးသတင်းကြောင့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ခံစားကြေကွဲနေရှာတဲ့ အိချောပို. – Askstyle
.အမာခံပရိသတ်ရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနာရေးသတင်းကြောင့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ခံစားကြေကွဲနေရှာတဲ့ အိချောပို.
စူစူလုိ့ ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္စနိုးနဲ့ေခၚၾကတဲ့ မင္းသမီးေလး အိေခ်ာပိုကေတာ့ ရုပ္ရည္မွာေရာ၊ သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာပါ ထူးခြ်န္သူေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အနုပညာသက္တမ္း (၉) နွစ္ေက်ာ္တိုင္ရိွလာခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ အိေခ်ာပိုက တစ္ေန့ထက္တစ္ေန့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရိွလာျပီး ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကို အမ်ားအျပားရရိွလာခဲ့သလို နာမည္ၾကီးရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးအျဖစ္ ေနရာယူထားနိုင္တာ ေတြ့ရပါတယ္။ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းေပမယ့္ အကယ္ဒမီဆုၾကီးနဲ့ အၾကိမ္ၾကိမ္လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့ အိေခ်ာပိုက ပရိသတ္ေတြေပးတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကိုေတာ့ အခုိင္အမာရရိွထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကိုရရိွထားတဲ့ အိေခ်ာပိုက သူမကိုယ္တိုင္လည္း ထမင္းရွင္ေက်းဇူးရွင္ပရိသတ္ေတြကို မိသားစုသဖြယ္ သေဘာထားသူေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာလည္း အိေခ်ာပိုက သူမကို အမာခံအားေပးတဲ့ ပရိသတ္ရဲ့ ဝမ္းနည္းစရာနာေရးသတင္းေၾကာင့္ “ကိုယ့္အမာခံပရိတ္သတ္ဆိုတာ ကိုယ့္မိသားစုလိုပါပဲ။ ဘာစကားမွေျပာမထြက္ႏိုင္ေတာ့လို႔ မမဇာေရ..ေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ပါေစ ” ဆိုျပီး သူမအေပၚ အရမ္းခ်စ္ျပီး အားေပးတဲ့ ပရိသတ္အစ္မအတြက္ ထပ္တူဝမ္းနည္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အိေခ်ာပိုကေတာ့ သူမကို အားေပးခဲ့တဲ့ အမာခံပရိသတ္ကို ဆံုးရႈံးလိုက္ရတာ မိသားစုဝင္တစ္ဦး ဆံုးရႈံးလိုက္ရသလို ခံစားေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သူ အစ္မလည္း ေကာင္းရာမြန္ရာဘံုဘဝကို ေရာက္ရိွပါေစလို့ ညိွဳးငယ္စြာနဲ့ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
စူစူလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးလေး အိချောပိုကတော့ ရုပ်ရည်မှာရော၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်သူလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာသက်တမ်း (၉) နှစ်ကျော်တိုင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အိချောပိုက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အများအပြားရရှိလာခဲ့သလို နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် နေရာယူထားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပေမယ့် အကယ်ဒမီဆုကြီးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်လွဲချော်နေတဲ့ အိချောပိုက ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုတော့ အခိုင်အမာရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ အိချောပိုက သူမကိုယ်တိုင်လည်း ထမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေကို မိသားစုသဖွယ် သဘောထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း အိချောပိုက သူမကို အမာခံအားပေးတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာနာရေးသတင်းကြောင့် “ကိုယ့်အမာခံပရိတ်သတ်ဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစုလိုပါပဲ။ ဘာစကားမှပြောမထွက်နိုင်တော့လို့ မမဇာရေ..ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေ ” ဆိုပြီး သူမအပေါ် အရမ်းချစ်ပြီး အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အစ်မအတွက် ထပ်တူဝမ်းနည်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိချောပိုကတော့ သူမကို အားပေးခဲ့တဲ့ အမာခံပရိသတ်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ မိသားစုဝင်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလို ခံစားနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ အစ်မလည်း ကောင်းရာမွန်ရာဘုံဘဝကို ရောက်ရှိပါစေလို့ ညှိုးငယ်စွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။